Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay Gobolka Hiiraan
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Sarkaal sare oo katirsanaa Kooxda Al Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in Sarkaalka Al Shabaab oo lagu magacaabi jiray Cali Axmed Guure, lagu dilay howlgal gaar ah oo Ciidamada Soomaaliya ka fuliyeen deegaan ku yaalla inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne iyo Maxaas.
Cali Axmed Guurre ayaa la sheegay inuu Al Shabaab u qaabilsanaa aruurinta lacaga Zakada Kooxda ka qaado dadka ku nool deegaanada u dhaxeeya Beledweyne iyo Maxaas, gaar ahaan Baar Dheere iyo Hees.
Ciimdada dowladda oo kaashanaya kuwa Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM ayaa si wadajir ah u qaaday duulaanka, kaasi oo ay kula wareegeen deegaanada kor ku xusan, iyadoo dadka deegaanka ay aad usoo dhaweeyeen tallaaban.
Al Shabaab wali kama aysan hadlin hadalka kasoo yeeray dowladda, ee ku aadan dilka Sarkaalka u qaabilsanaa arrimaha Zakada ee ku dhintay weerarka ka dhacay duleedka Beledweyne.
Al-Shabaab oo lagala wareegay deegaano muhiim ah
Soomaliya 13.05.2018. 10:17
Howlgalkan ay Ciidamada ka fuliyeen Hiiraan ayaa ka dhashay khasaaro xooggan, oo gaarey....
Soomaaliya: Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyne
Soomaliya 09.01.2018. 10:25
Al-Shabaab oo Ciidan Ajnabi ah ku weerartay gobolka Hiiraan
Soomaliya 30.09.2018. 15:47
Ciidamo Ajnabi ah oo Qarax lagu eegtay Koonfurta Soomaaliya
Soomaliya 29.06.2018. 16:14